Dowlada Kenya oo Shaacisay Waqtiga Rasmiga ay Ciidankeeda kala baxeyso Somalia – XAMAR POST
Dowlada Kenya oo Shaacisay Waqtiga Rasmiga ay Ciidankeeda kala baxeyso Somalia
By Mohamed Ahmed On May 19, 2018
Dowladda Kenya ayaa shaacisay waqtiga rasmiga ah ee ay Ciidankeeda ka baxayaan Soomaaliya kaddib markii Golaha amaanka ee Qaramada Midoobey ay dejisay waqtiga ay Ciidanka AMISOM ka baxayaan Soomaaliya.
Qaraarka tirsigiisu yahay 2372 ee Golaha amaanka ee Qaramada Midoobey ee soo baxay September 2017, ayaa lagu shacaiyay hanaanka bixitaanka Ciidanka AMISOM ee Soomaaliya.
Ciidanka Kenya waxaa ay Soomaaliya ka baxayaan Bisha December ee sanadka 2020ka, markaas oo qeybaha ay joogaan ku wareejin doonaan Ciidanka Dowladda Soomaaliya.
Sarkaal ka mid ah Ciidanka Kenya ee Soomaaliya jooga ayaa sheegay in qorshaha bixitaanka Ciidanka AMISOM ahddii uu u dhoco sida loogu talagalay ay Ciidanka Kenya wareejin doonaan 16 aag oo hoostaga taliska 2aad ee AMISOM oo ay Kenya gacanta ku heyso,waxaana ku wareegaya Ciidamada Soomaaliya.
Sanadkii la soo dhaafay 200 oo Askarta Kenya ah ayaa ka baxday Soomaaliya,halka qorshuhu yahay in 200 oo kale ay ka baxaan Bisha December ee soo socota,taas oo qeyb ka ah qorshaha markiiba 1,000 Askari oo AMISOM ah ay uga baxayaan dalka Soomaaliya.
Shanta dal ee Ciidamada Milatariga ku biiriyay howlgalka AMISOM ee kala ah; Burundi, Djibouti, Kenya, Uganda iyo Ethiopia,ayaa la filayaa in ay fuliyaan qorshaha ka bixitaanka Ciidanka AMISOM ee Soomaaliya.
Dhamaan howlaha dhinaca Amniga ee Soomaaliya marka la gaaro sanadka 2020ka waxaa la wareegaya Ciidamada Dowladda Soomaaliya,waxaana taageeraya Ciidamada AMISOM ee Booliska ah.
AKHRISO: Maxaa ka jira in Soomaaliya iyo Kenya uu u socdo Wadahadal ku saabsan Muranka Badda?